DEG-DEG: Goolhayihii Arsenal Ee Emiliano Martinez Oo Aston Villa Ku Biiray, Qiimaha Uu Ku Baxay & Sababta Ay Farxada Ugu Tahay Arteta – Laacibnet.net
DEG-DEG: Goolhayihii Arsenal Ee Emiliano Martinez Oo Aston Villa Ku Biiray, Qiimaha Uu Ku Baxay & Sababta Ay Farxada Ugu Tahay Arteta
Goolhayihii kooxda Arsenal ee Emiliano Martinez ayaa si rasmi ah uga wareegay dhinaca kooxda kale ee Premier League ee Aston Villa kaddib wadahadalo mudo socday oo ay labada dhinac ugu dambayn ku heshiiyeen.
Goolhayaha ree Argentina oo soo joogay Emirates Stadium tan iyo sanadkii 2012 balse waxa uu ugu dambayn soo af-meeray heshiiskii uu ku joogay London isaga oo qandaraas afar sano ah u saxeexay Villa.
Martinez ayaa helay fursad iyo tijaabo shaxda koowaad ee Arsenal ah xilli ciyaareedkii hore gaar ahaan kaddib kasoo laabashadii go’doonkii caabuqa Korona markaas oo uu dhaawacmay goolhayihii dookha koowaad ee Bernd Leno.
28 sano jirkaas ayaa soo caddeeyay inuu yahay wax ka badan goolhaye kaabis ah oo dookha labaad ah isaga oo kusoo bilawday labadii kulan ee ay koobabka ku qaaday Arsenal ee Final-kii FA Cup iyo Community Sheild.
Laakiin tababaraha Gunners ee Mikel Arteta ayaa si deg-deg ah shaxdiisa koowaad Leno ugu soo celiyay kulankii furitaanka xilli ciyaareedka Premier League ee ay guusha kasoo gaadheen dhigooda Fulham.
In Martinez uu 20 Milyan oo Pound ugu wareegayo Villa ayaa farxad u ah tababare Arteta maadaama oo uu ka caawin doono inay kor u qaadaan lacagta ay suuqa ku gelayaan isla markaana uu heli doono lacag uu bar-tilmaameedyadiisa ku doonto.
Arteta ayay labada ciyaaryahan ee uu inta ugu badan ka doonayo Arsenal yihiin kubad sameeyaha Lyon ee Houssem Aouar iyo bur-buriyaha Atletico Madrid ee Thomas Partey.
2011 ayuu kuso biiray arsenal ee mahan 2012